UV mwenje mwenje yekuchenesa mvura → Acuva • Yacht • Campers • Imba
UV mwenje mwenje - dzidza nezve inoshanda uye mushandisi-inoshamwaridzika DZIDZISO tekinoroji yekuchenesa mvura!
Kuchenesa sei mvura?
Chinhu chekutanga chinouya mundangariro dzemunhu wese ndechekuti chisiye chipfuure nepakati filtr.
Tsvina ichagara pane sefa uye isu tinowana takachena mvura.
Nekudaro, zvekuita mumamiriro ezvinhu apo mvura inoita kunge yakachena, uye zvirimo zvine zvinogona kukuvadza, kunyange zvine njodzi kuhutano hwedu utachiona, mabhakitiriya nezvimwe zvipuka?
Kungoipfuudza nepasefa hakungaite chinhu. Mune ino kesi, mvura inofanira kucheneswauye kwete kusefa chete.
Usasefa mvura - ishambidze!
Kuchenesa, kurapa kana kuchenesa inzira inoita senge yakaoma kuita, semuenzaniso, nekushandiswa kwemakemikari.
Mazhinji acho anokanganisa zvakasikwa nharaunda, kunyanya emvura zvipenyu. Isu hatidi zvakare kuzviisa chepfu isu nemakemikari uye tinodya mvura isingafadzi nekunhuwirira kunoyeuchidza zvemukati mefesi.
Saka chii chekushandisa?
Unogona ozone. Kurapwa kweOzone zvinobudirira kunosuka uye hakuna divi kune kuravira kwemvura. Nekudaro, zvakaoma kufungidzira ozonation yemvura kumba.
Saka nekukurumidza sei, zvakachipa, zvinobudirira, munzira ine hushamwari uye isina hunhu yekuchenesa mvura kumba ... kumisasa, pane yacht, muhofisi uye mushopu?
Acuva UV mwenje ye LED
Isu tinokupa iwe kambani yepamusoro Acuva. Isu tiri vega uye takananga kugovera zvigadzirwa zveAcuva pamusika wePoland.
Acuva makiti ekuchenesa mvura achishandisa UV mwenje mwenje. Izvi ndizvo zvigadzirwa zvechizvino-zvino zvakagadzirwa muCanada.
Kunatswa kwemvura kushandisa maAcuva masisitimu zvakaringana Zana kakabudirira kupfuura kushandisa nzira dzinokwikwidza.
Zvakare, iko kushandiswa kwe UV mwenje mwenje inogadzira zvigadzirwa zveAcuva mhinduro yakakwana kwete chete yeimba neyehofisi, asi zvakare yakakura yekuchenesa mvura pane yatch kana mukambi.
Kunatswa kwemvura uchishandisa Acuva UV-LED kunoenderana neruzivo rwechizvino-zvino rwehunyanzvi uye zvakanyanya ecological. Hapana makemikari, akadai seklorini, anopinzwa mumvura.
deletes 99,9999% yebhakitiriya mavairasi uye utachiona
Mvura inongoitwa yekunatswa nekuda kweizvozvo 99,9999% yebhakitiriya, mavairasi uye mamwe marwisi anobviswaizvo zvinogona kukonzera matambudziko ehutano uye izvo zvinopinda nyore nyore kuburikidza nechero echinyakare mvura firita.
Ivo vanoshandisa Acuva UV LED yekuchenesa mvura, isu tinokwanisa kutora mvura kubva kuhova dzemakomo nemadhamu tisingatyi kuti tichazorwara kubva mukudyiwa kwebhakitiriya, mavairasi kana microorganisms vanogara mumvura. UV mwenje mwenje ichauraya hutachiona, incl SARS-COV-2uye mabhakitiriya anogona kukonzera matambudziko emudumbu.
Kunatswa kwemvura uchishandisa mwenje yeUV-LED hakukanganisa kuravira kwayo. Hutachiona, hutachiona uye utachiona hunofa, asi kuumbwa kwemvura hakuchinje. Hapana chinhu chinounzwa, saka mvura inonaka zvakafanana nezvayakaita isati yacheneswa. Kunhuwirira kwayo uye neruvara hazvichinje kana. Iyo Acuva UV-LED yekunatsa haina kana chainoita kunze kwekuivhenekera.
Kunatswa kwemvura kunosanganisira kurapa nehurefu hurefu, pakati pe250 ne280 nm. Kuburitswa kwakadai kunokonzeresa kuti DNA yezvimera zvipenyu zvinogara mumvura iputse. Nekudaro, mvura inonatswa. 99,9999% yeese mabhakitiriya, mavairasi uye zvimwe zvipembenene zvinofa.
Disinfection matekinoroji anoshandisa UV mwenje parizvino iri kusimukira zvakanyanya uye inowanzo shandiswa munzvimbo dzakasiyana dzehupfumi.
Nekudaro, iwe hautombofaniri kuziva izvi, nekuti iko kushandiswa kweAcuva UV LED masisitimu ari nyore kwazvo. Haufanire kubata chero chinhu chakaomarara. Haufanire kurangarira chero chinhu. Iyo Acuva UV LED yekuchenesa mvura inoshandiswa nenzira imwecheteyo seyakajairwa pombi.
Uyezve, iyo Acuva UV-LED yekuchenesa mvura masystem akaenzana muhukuru. Ivo vanotora nzvimbo diki kwazvo, saka ivo vakanakira macaravani, makambi uye pazvikepe, zvikepe uye zvikepe.
Inogona kushandiswa nyore nyore mudzimba dzezhizha, zvitoro, mahofisi, maresitorendi, pamwe nedzimba dzisina kuroorwa uye dzemhuri dzakawanda.
Kusiyana nemafuta emvura, mwenje ye UV-LED haina kugadzirisika-isina.
Haufanire kuchenesa kana kutsiva chero chinhu. Hapana chinovhara. Izvo hazvidikanwe kudzora padanho revhu mune iyo firita. Pano, iyo UV-LED mwenje inopenya pamusoro pemvura.
Iko kushandiswa kwemwenje yeUSU fluorescent zvakare yakakura kwazvo kune mushandisi. Iyo ine maitiro akanaka pane yekuchengetedza-yemahara mashandiro eiyo yese mvura yekurapa system.
Acuva Arrow 5 UV-LED - yekuchenesa mvura netepu
10+ makore garandi
Iine garandi refu uye nehupenyu hwese. Mabhuru akajairwa anoda kuchinjwa nguva dzose. Marambi eLED ane garandi yegore + gumi nemashanu, haapisi, shanda nekukurumidza mushure mekubatidza uye usatsva.
Kupesana nemarambi akagadzirwa muchinyakare tekinoroji, iyo Acuva UV-LED chigadzirwa zvakare ine zvakatipoteredza zvine hushamwari, sezvo pasina mercury mune LED fluorescent mwenje.
Acuva Arrow 5 UV-LED - yekunatsa mvura
UV-LED ine zvakare yakaderera zvakanyanya magetsi kushandiswa pane iyo UV system inoenderana neyechinyakare mercury bulbs. Acuva UV-LED masisitimu akagadziriswa kuti agadziriswe nemabhatiri. Dzinogona kuve dzakabatana ne12V magetsi pamwe ne AC DC.
Acuve inopa zvigadzirwa zvinoenderana neese marudzi ese ekushandisa. Kubva pamhando dzakasiyana-siyana dzeUV-LED yemvura yekuchenesa, unogona kusarudza zvishandiso zvine huwandu hwemalita mashanu paminiti uye nehupenyu hwebasa re5 litita.
Acuva Eco NX-Sirivheri UV-LED - yekuchenesa mvura nepombi
Rega kunetseka nezvemvura yakabhoderedzwa muyacht yako kana karavhani. Shandisa off-line mvura uye uichenese usati wanwa uchishandisa iyo Acuve UV-LED Kuchenesa Sisitimu. Nakidzwa isina gwapa yakachena pombi yemvura muchikepe chako uye mukambi yako kana imba yezororo isina mvura.
Acuva Eco NX-Sirivheri UV-LED
Kusarudza masisitimu ekuchenesa mvura Acuva Uine UV-LED, unosarudza zvigadzirwa zvemhando yepamusoro zvinopa yakachena, isina mvura mvura yeimba yako, chikepe kana mota.
UV mwenje mwenje vs. Mwenje yeUV
Yakajairwa UV nzira yekurapa mvura inoshandisa UV mercury mwenje. Nekudaro, pane kunetsekana kwakakomba pamusoro pesimba renharaunda uye kushomeka kwekuita kwemarambi eUV.
5 / 5 ( 3 mavhoti )
acuvaacuva ecoacuva eco uv akatungamiraacuva yakatungamira uv mvura yekuchenesa systemacuva yekuchenesa systemacuva matekinorojiacuva technologies incAcuva UV LEDacuva uv mvura yekuchenesaacuva mvuraacuva mvura firitaacuva yekuchenesa mvura systemacuva mvura yekuchenesaacuva kurapwa kwemvura masisitimuAllegro uv marambiGermicidal UV mwenjeUV LED mwenje wekuuraya hutachionaGermicidal UV mwenje yemvurakunatswa kwemvuraKunyangwe UV mwenje yakatungamirwa inokuvadzamwenje yeUV inokuvadzauv mvura disinfectionkurapwa kwemvura disinfectiondisinitness yemvuranzira dzekudzivirira mvuradisinawon yemvura yekunwauv mvura disinfectiondisinfection yemvura yekunwa matangikunatswa kwemvura mudzimbaUV yakatungamira mwenje yemvura yekudziviriramarambi emagetsiakatungamira uye UV marambiakatungamira mwenje UV radiationakatungamira UV mwenjeakatungamira UV mwenje wongororoMwenje yeUVUV kana marambi akatungamirwaUV mwenje yemvuraUV uye akatungamira marambiUV akatungamirira marambiuv akatungamira mwenje wongororoakatungamirirwa mumvurayakanakisa yakatungamirwa UV mwenjeyakanakisa uv yakatungamira mwenjekunatswa kwemvurakurapwa kwemvura inonayakunatswa kwemvura yekunwamaindasitiri kurapwa kwemvurakupona kunatswa kwemvurakucheneswa kwemvura kumbakucheneswa kwemvura mutsimekunatswa kwemvura yepombikunatswa kwemvura kubva mumatsimekunatswa kwemvuraUV sterilizerultraviolet mvura yekuchenesauv akatungamira mvura yekuchenesauv akatungamira kurapwa kwemvurauv mvura yekurapa masystemUV-led mvura yekuchenesakambani yekuchenesa mvurachii chinonzi nsfmvura pachikepemvura mumotorhomeakatungamirira girobhu racho UV rambiakatungamira mababu eiyo UV mwenje
Ona zvimwe zvigadzirwa:
Ruoko disinfection zviteshi